glaze zvedongo Vagadziri | China glaze ceramic Suppliers & Fekitori
Crackle glaze chisvusvuro seti
Tsanangudzo: Crackle glaze dinner set
Crackle glaze ndeimwe yekugadzira ruvara glaze.
Zvakare yakakosha glaze nekuti kune akawanda madiki madiki mitsara anotsemuka pane zvedongo muviri wepamusoro, asi muviri mukati isina kutsemuka. Iyo mitsara mitswe ine yakashongedzwa kushongedzwa pane chigadzirwa.
Yakagadzirwa ruvara glaze chisvusvuro yakaiswa
Kugadzira glaze ndeimwe yemhando yakasarudzika glaze, fekitori inowedzera chimwe Metallic element kuva ruvara glaze, uye iyo glaze inoratidzira inoshamisa akasiyana mavara neOxidation kana Kuderedza kupfura muTunnel kiln. Sezvo ichi chiri chemakemikari maitiro uye oxidizing reaction, hapana anoziva iyo glaze icharatidza iwo vara nerudo panguva yekupfura. Saka iyo glaze isu yatinodaidza IMWE CHETE CHETE color glaze.
Iye zvino isu zvakare tinogadzira imwezve yepamusoro rudo, isu takadaidza Speckle color glaze, inogona kuratidza madiki madiki ari pamusoro kana iwe uchibata chigadzirwa neruoko.
speckle color glaze + ruoko pendi chisvusvuro seti-coupe chimiro
Speckle color glaze ndeimwe mhando yeCreative glaze; iyo yakakosha technical, iyo fekitori ichawedzera chimwe Metallic element kuva ruvara glaze, wozopeta ruoko rim. Iyo color glaze inoratidza akasiyana akasiyana mavara neOxidation kana Kuderedza kupfura muTunnel kiln. Sezvo ichi chiri chemakemikari maitiro uye oxidizing reaction, hapana anoziva iyo glaze icharatidza iwo vara nerudo panguva yekupfura. Saka iyo glaze isu yatinodaidza IMWE CHETE CHETE color glaze.
Ruvara glaze chisvusvuro seti-Flat chimiro
Chinyorwa: Stoneware ine ruvara glaze
Ruvara rwekupenya rinoshandisa kutarisisa kwakasiyana kuenzanisa chikamu chakasiyana sekushongedza, fekitori ichaita iyo emboss pateni pahuvhu, ipapo, iyo pateni inoteedzera kune chigadzirwa. Inogona kubata bata emboss neruoko.
Ruvara glaze chisvusvuro seti-Hexagon chimiro
Iyi yekuunganidza ine yakakosha chimiro iyo isiri iyo yakajairwa yakatenderera chimiro asi iine Hexagon chimiro, Octagonal chimiro, mativi chimiro, uye mvura inodonha chimiro dhishi. Iyo inokodzera kwazvo kushandiswa kwezororo, zvakare inogona sechipo chakatemwa. Iwe unogona kusarudza akasiyana chimiro & kuenzanisa akasiyana mavara seti imwe.
Emboss color glaze ndeimwe yemhando yakasarudzika glaze, fekitori ichaita iyo emboss pateni pahuvhu, ipapo, iyo pateni inoteedzera kune chigadzirwa. Inogona kubata bata emboss neruoko.
Emboss ruvara glaze chisvusvuro seti-Coupe chimiro